Apple Music yave kuwanikwa muSouth Korea | Ndinobva mac
Apple Music yave kuwanikwa muSouth Korea
Vhiki rino nhau dzakanangana neApple Music dzave dzinoverengeka. Kune rimwe divi, isu tinowana kusvika kweApple yekumhanyisa mimhanzi sevhisi kuIsrael, nyika yakamirira kweinopfuura gore kusvikira pakupedzisira Apple yakwanisa kusvika chibvumirano neruzhinji rwevaartist nemapoka munyika, izvo nekusaiswa mumapoka kwave kwakaomarara kupfuura zvakajairwa. Asi zvakare pakutanga kwevhiki, Apple yakazivisa kuti Bloomberg Radio yave kuwanikwa pasi rese kuburikidza neApple Music nekuda kwechibvumirano icho makambani ese ari maviri asvika. Kuti tivhare svondo isu tine nhau dzekuuya kweApple Music kune imwe nyika, mune ino kesi kuSouth Korea, imba yemurwi wayo mukuru, Samsung.
Pane ino nguva, uye kusiyana nekutangwa muIsrael, Apple yakazivisa kuburikidza neTwitter kuuya kweApple Music muSouth Korea, zuva rimwe chete mushure mekuzivisa zviri pamutemo kuvhurwa muIsrael, sevhisi yatovepo kubvira kutanga kwesvondo. Nguva dzese apo Apple inogara munyika nyowani, inopa yakasununguka nguva yemwedzi mitatu kuitira kuti chero mushandisi weApple aedze sevhisi uye aongorore kana ichinyanya kunakidza kupfuura sarudzo iri kushandiswa panguva iyoyo, kana zvirizvo.
Nezve mitengo yemasevhisi, tinogona kuona kuti, sedzimwe nyika, mitengo yakaderera muUnited States neEurope. Iyo yega account ine mutengo we $ 7,99 nepo kana vachibvumirana account yemhuri, mutengo unokwira kusvika kumadhora 11,99. Apple yakamanikidzwa kupa mitengo iyi kuyedza kukwikwidza kubva kwauri kuenda newe nemasaini ekushambadzira emimhanzi ayo atovepo munyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple Music yave kuwanikwa muSouth Korea
Shadow Complex Remastered, mutsva mutambo paMac App Store
iTunes inogadziridza kune vhezheni 12.4.3 kugadzirisa nyaya nerunyorwa